UK oo noqonaysa "xarunta daroogada cocaine" - BBC News Somali
UK oo noqonaysa "xarunta daroogada cocaine"
Sannadkan 2018ka waxaa caasimadda lagu dilay 67 ruux
Ben Wallace ayaa xildhibaannada u sheegay in tiknoolajiyaddu ay dhallinyarada u suuragalinayso ganacsiga daroogada, una wada xiriiraan si ammaan ah, ayna xiriir samaysanayaan, arrintaasina ay gaartay meel aan hadda ka hor la gaarin.
Wuxuu sheegay in uu rajaynayay in lacag dheeri ah la siiyo iyadoo bartanka lagaga jiro walaaca ay xildhibaannada xisbiga shaqaaluhu ka qabaan kharashaadka laga dhimayo booliiska.
David Lammy oo ka tirsan xisbiga Shaqaalaha oo ka digaya in dad hor leh la laayo ayaa sheegay in loo baahan yahay in wasiirradu is waydiiyaan "in nolosha dadka madaw ay ahmiyad u leedahay?"
Caasimadda ayaa sannadkan lagu dilay 67 ruux, xildhibaanka oo dalbanaya in arrintaas wax laga qabtana wuxuu sheegay in laga yaabo in tiradaasi ay gaarto 100.
"Jeermis carruurtaada ka difaaci kara cudur dilaa ah"
Taranta Maraykanka oo hoos u dhacday tan iyo 1987
Hadalkiisa ayaa yimid iyadoo xildhibaannadu ay ka doodayaan istaraatiijiyadda dawladda ee ku aadan dambiyada halista ah.
Shan qodob oo hay’adda Xuquqda Aadanaha ay ka qortay Duuliye Fu'aad
Hay’adda xuquuda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ka soo saartay xarigga duuliye arrimo siyaasadeed ugu xiran Jabuti.
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga dib loo furayo duullimaadyada gudaha
Golaha wasiirrada ayaa go'aan kasoo saaray dib u furitaanka duullimaadyada gudaha Soomaaliya.
Ninkii koomada kasoo kacay isagoo ku hadlaya luuqad qalaad
Ben McMahon wuxuu dhaawac halis ah kasoo gaaray madaxa kaddib markii uu galay shil gaari. Laakiin markii uu soo kacay ma uusan aqoonin luuqaddiisa hooyo.
28 Maajo 2020
Arooskii Aamina Mude iyo Ben Kitili ee mar aadka loo hadal hayay oo "ku soo idlaaday kala tag"
Baraha Bulshada Kenya ayaa lagu hadal hayaa furiinka gabadh Soomaali ah iyo wiil caan ka ah dalka Kenya oo ah weriye ka howl gala mid ka mid ah warbaahinta maxaliga ah oo arooskooda uu dhacay laba sano ka hor.
29 Juunyo 2020
Shan arrimood oo aadan ka ogeyn 60-guurada xorriyaddii Soomaaliya
Waxaa jira waxyaabo badan oo aysan dadka intooba badan ka ogeyn taariikhda ku gadaaman halgankii xornimo doonka iyo marxaladihii lasoo maray xilligii gumeysiga.
30 Juunyo 2020
Fayras kale oo ka dillaacay Shiinaha oo laga cabsi qabo inuu dunida ku faafo
Xanuunkan ayaa dhawaan lagu arkay xayawaanka doofaarka, waxayna seynisyahannada ka digayaan inuu dunida ku faafo.
Shan aroos oo Soomaalidu ay aad ugu kala aragti duwanaatay
Dhammaan aroosyadaas ayaa baraha bulshada ka dhex dhaliyay hadal hayn iyo doodo ay is dhaafsanayeen dadka isticmaala ee Soomaalida ah.
Khudbadda Xaliimo Yarey ayaa si weyn looga dhursugayay.
Maxaa ku khasbaya xiddiga tartanka garka ee Mareykanka inuu hadda garkiisa xiiro?
Michael J Johnson waxaa uu leeyahay gar weyn oo gaarayo xabadkiisa.
Maxay tahay shaqada madaxweyne ku xigeenka shirka golaha guud ee Qaramada midoobay?
Abuukar Baale ayaa loo doortay madaxweyne ku xigeenka golaha guud ee Qaramada Midoobay. - Waa kuwee dalalka kale ee shir-guddoonka la ah Soomaaliya
Jahwareerka sharci ee ku gedaaman matalaadda Banaadir
Tan iyo markii baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu ansixiyay matalaadda gobolka Banaadir ayaa waxaa soo baxayay dood sharci ah oo ku saleysan qaabka ay tahay in loo maro maqaamaka iyo matelaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir.
Dowladda Shiinaha oo ka hadashay iskaashigii ay kala saxiixdeen Taiwan iyo Somaliland
Kumuu ahaa fannaanka dilkiisa uu gilgilay dalka Itoobiya?
Saddex arrimood oo Farmaajo laga filaayay inuu ka hadlo balse uusan ka hadlin